» बीमा तथ्याङ्क
काठमाडौं । हाल संचालनमा रहेका २० निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक बर्षको चौथो महिना अर्थात कार्तिक महिनासम्ममा ११ अर्ब १९ करोड ९३ लाख ११ हजार रुपैयाँ कूल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । बीमा समितिले आज सार्वजनिक गरेको चार...
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको अवधिसम्मा जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफनो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैसमासको अवधिमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्ताहरुलाई दिने कमिशन १३ दशमलव ०६ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ३ लाख...
काठमाडौं । अमेरिकन जीवन बीमा कम्पनीको नेपालस्थित शाखा कार्यालय मेट लाइफले चालु आवको प्रथम त्रैमासिक वित्तिय विवरण आज प्रकाशन गरेको छ । कम्पनीले प्रकाशन गरेको वित्तिय विवरण अनुसार मुनाफा बाहेकका सबै सूचांकमा प्रगति देखिएको छ । मुनाफा २० प्रतिशत...
निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको कूल दावी भुक्तानी १२ प्रतिशतले घट्यो, १४ को बढ्यो (तथ्याङ्कसहित)
काठमाडौ । नेपालमा सञ्चालित २० वटा मध्ये १८ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तिय विवरण प्रकाशित गरिसकेको छन् । कम्पनीहरुले प्रकाशन गरेको वित्तिय विवरण अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको १४२५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । गत...
१८ स्वदेशी जीवन बीमा कम्पनीले तीन महिनामा संकलन गरे ३८ अर्ब कुल बीमाशुल्क, कुनको कति ?
काठमाडौं । हाल संचालनमा रहेको १९ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये नेपालमा दर्ता भई सञ्चालित १८ जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये अमेरिकी कम्पनी मेट लाईफ एलिकोको नेपालस्थित शाखा...
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको जीवन बीमा कोषमा ३७ अर्ब, सबै सूचांकमा गर्यो प्रगति
काठमाडौं । सरकारी लगानीको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले सबै सूचांकमा प्रगति गरेका छ । संस्थाले चालु आवको प्रथम त्रैमासिक वित्तिय विवरण आज प्रकाशित गर्दै सुधारको मार्र्गमा अघि बढेको देखाएको हो । संस्थानको जीवन बीमा कोष २१ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ...
१८ नेपाली निर्जिवन बीमा कम्पनीले तीन महिनामा संकलन गरे नौ अर्ब कूल बीमा शुल्क, शिखर सबैभन्दा अगाडि, कसको कति ? (तथ्याङ्कसहित)
काठमाडौं । नेपालमा कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालित निर्जिवन बीमा कम्पनीहरु १८ वटा छन् । सबै कम्पनीहरुले चालु आवको प्रथम त्रैमासिक वित्तिय विवरण प्रकाशन गरिसकेका छन् । त्रैमासिक वित्तिय विवरणमा आधारित तथ्याङ्क अनुसार कूल १८ वटा कम्पनीले तीन महिनामा...
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको खुद बीमाशुल्क आर्जन २१ प्रतिशतले बढ्यो, मुनाफामा सामान्य सुधार
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले यस त्रैमासको अवधिसम्मा आफनो खुद बीमाशुल्क आर्जन २२ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको छ।यस त्रैमासको अवधिसम्ममा कम्पनीको खुद नाफामा भने सुधार...
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको खुद बीमाशुल्क आर्जन ८१ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य सूचक कस्तो ?
काठमाडौं । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले यस त्रैमासको अवधिसम्ममा आफनो खुद बीमाशुल्क आर्जन ८१ प्रतिशतले वृद्धि गरेर ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल...